China China Amulite Group MGO Board Production Line mpanamboatra sy mpamatsy | Amulite
Calcium Silicate Board / Fiber Cement Board Productio ...
Takelaka vita amin'ny roapolo tsy miorina amin'ny asbestos / asbestos ...
China Amulite Group MGO Board Production Line
Amulite MGO Board Production Line dia tsipika famokarana mandeha ho azy novolavolain'i China Amulite Machining Group, namboarina niaraka tamin'ny fangatahan'ny mpanjifa an-trano sy an-tsena an-taonany maro tamin'ny traikefa fanamboarana.
Amulite MGO Board Production Line dia tsipika famokarana mandeha ho azy novolavolain'i China Amulite Machining Group, namboarina niaraka tamin'ny fangatahan'ny mpanjifa an-trano sy an-tsena an-taonany maro tamin'ny traikefa fanamboarana. Ny lamin'ny famokarana MGO Board dia nanova tanteraka ny teknolojian'ny masinin-tseranana MGO Board, mba hamelana ny fanatontosana tsara ny famokarana MGO, hanatsara ny fahombiazan'ny fiasa, hanatsara ny ambaratonga mandeha ho azy ary hitsitsy ny herin'ny asa, ho mpamatsy tena eo amin'ny indostrian'ny birao MGO ;
Fomba fijerin'ny tsenan'ny tsipika famokarana MGO Board
Araka ny statistika mifandraika amin'izany, tamin'ny taona 1993, ny indostrian'ny haingon-trano anatiny any Chine dia nanana volavolan-tetikasa 5 miliara USD, raha ampitahaina amin'ny 6,5 miliara USD tamin'ny 1994. 7,5 miliara dolara USD izany tamin'ny 1995, 9 Miliara USD tamin'ny 1996, ary 11 Miliara USD tao 1997, izao dia 600Billion USD any Shina. Avy amin'ny tarehimarika tsotra, ny habetsaky ny volavola haingon-trano dia mihamitombo haingana isan-taona, ary ny haingo sy ny indostrian'ny fananganana vitaina dia hahazo fampandrosoana bebe kokoa amin'ny fiposahan'ny masoandro; miaraka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny olona, ​​be dia be ny fividianana trano tsy miankina. , Ary ny indostrian'ny haingon-trano anatiny dia hivoatra hatrany.
Fampiasana ireo vokatra ao amin'ny birao MGO sy ireo tondro teknika
Ny birao MGO sy ny birao tsy misy kitay dia feno sawdust, ronono ary potipotehina karazan-javamaniry isan-karazany (misafidiana iray na mifangaro), ary asio akora simika maromaro ho fitaovana novaina amin'ny alàlan'ny famokarana dingana manokana. Ny Board Straw dia manana ny mampiavaka azy amin'ny tanjany avo, ny sakany vokatra lehibe, ny afon'afo, ny rano, ny fiarovana ny tontolo iainana maitso, ny vidiny mirary sns. Misy famolavolana vokatra vita amin'ny birao an-jatony, toy ny: Birao mena mena (fotsy) mena, birao Walnut mena (mainty), birao oak, pears, birao Camphor voninkazo, sns. , Composite, mampitaha amin'ny tontonana hazo, Ny Board MGO dia manana ny fampiharana sy ny toetra mampiavaka azy. Ary misimisy kokoa amin'ny haingon-trano anatiny amin'ny haingon-trano fivarotana, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, toeram-pisakafoanana amin'ny alina, toerana, birao misy birao, rindrin'ny efitrano fandraisam-bahiny, varavarana, varavarankely, zipo amin'ny rindrina, valindrihana sns. Izy io koa dia ampiasaina betsaka amin'ny fanaka avo lenta, varavarana , sy ny efitrefitra. Ny Board MGO dia ambany ny sarany ary tsara kalitao, ary vokatra mety hanolo ny birao hazo isan-karazany.
Tondro ara-teknikan'ny birao MGO sy ny birao fandrehitra
1. Index Oxygène%: mihoatra ny 90
2. Fandoroana marindrano: SO
3. Fandoroana mitsangana: SO
4. Votoatin'ny hamandoana: 10,9%
6. Tanjona miondrika static: 169.46Mpa
7. Density: T / M31.13
8. Fanoherana ny rano: tsy misy vovoka mandritra ny 24 ora, tsy misy fiovana eo ambonin'ny faritra
9. Tsy misy fako telo, tsy misy fandotoana, miaro amin'ny tontolo iainana.
Endri-javatra ny Amulite MGO Board Production Line
1. Fiasana mandeha ho azy avo lenta: fehezin'ny rafitra PLC ny tsipika famokarana birao iray amin'ny MGO, izay mahatsapa ny famoahana ny môdely mandeha ho azy, ny mpandraharaha famoahana automatique automatique, ny fandrefesana ho azy, ny fanodinana automativa, ny fanaparitahana ho azy, ny fanidinana mandeha ho azy, ny fanapahana ho azy, ny famerenana azy, ny kaody mandeha ho azy, Function automatique toy ny fametrahana, démoulding automatique ary ny triming automatique.
2. Famoahana avo lenta: Ny haingam-pamokarana eo amin'ny tsipika famokarana dia azo ovaina, ary ny fivoahan'ny fanovana dia eo anelanelan'ny 1500PCS - 2600PCS, izay azo ahitsy arakaraka ny toe-javatra eo amin'ny tsena.
3. Ny famaritana ny birao MGO dia azo ahitsy: 2mm-40mm birao misy famaritana isan-karazany azo vokarina. Raha misy ny fepetra takiana manokana dia azo amboarina ireo fitaovana.
4. Vokatra marobe azo hamokarana: Board MGO, Board Flue, Birao fitambaran-drivotra fanamafisam-peo afovoany, Board MGO nohamafisina, birao fisorohana volo vita amin'ny vakana vita amin'ny varahina, birao fisorohana particle polystyrene, tabilaon'ny rindrina fisarahana, birao fisorohana rindrina ivelany ary vokatra hafa .
5. Ahena ny asa: fehezin'ny rafitra PLC ny tsipika famokarana iray manontolo, mpiasa 6 no afaka mamita ny laharam-pamokarana amin'ny tsipika iray manontolo, ary ambany ny halehiben'ny asa.
6. Fanitsiana mazava tsara momba ny famaritana: Ny roja fanerena faneriterena matevina tsirairay avy dia manaiky ny fifehezana fampisehoana nomerika, ary haingana ny hafainganam-pandaminana. Ny famaritana matevina samihafa dia namboarina mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny famokarana, ary avo ny fahamendrehana fanitsiana.
7. Fanapahana ho azy sy fisarahana: mandeha ho azy ny rafi-pandrefesana manan-tsaina mba hamonoana ho azy ny vokatra avy amin'ny famaritana isan-karazany arakaraka ny famaritana, izay mampihena ny asa, manatsara ny fahamarinan'ny vokatra, ary miantoka ny fiasan'ny famokarana haingana.
8. Modely fanadiovana mandeha ho azy: ny lamin'ny famokarana dia miaraka amina rafitry ny môdely fanadiovana mandeha ho azy, ary ny ao ambadiky ny môdely dia hadio toy ny vaovao aorian'ny vokatra ivelan'ny vokatra. Aorian'ny fandroahana ny vokatra, diovina ho azy eo amin'ny lafiny roa ny môdely miaraka amin'ny fitaovana manokana fanadiovana mandeha ho azy ny môdely mba hiantohana ny hatevin'ny vokatra avy amin'ny birao.
9. Fanapoahana ny birao mandeha ho azy: mampihena ny hamafin'ny asa ataon'ny mpiasa, mampaharitra ny androm-piainan'ny drafitra ary mampihena ny fahasimbana nataon'olombelona ho an'ny birao.
10. Palletizing sy fonosana mandeha ho azy: Araka ny takian'ny mpanjifa, dia afaka mahatsapa ny fametahana sy ny famonosana famaritana marobe sy ny habetsaky ny vokatra tsy voafetra.
11. Fanangonana vovoka afovoany: Misy fitaovana fanalana vovoka sy fanangonana vovoka mandritra ny famokarana sy ny dingana famaranana manaraka mba hahazoana antoka ny tontolo famokarana madio, hampihena ny fandotoana, hanatsara ny fisehoan'ny orinasa, ary ny vovoka voaangona dia azo ampiasaina indray ary mampihena ny vidin'ny famokarana.
Asehoy ny fizotry ny milina famokarana Board MGO
Modely famoahana mandeha ho azy
Rafitra fandrefesana mandeha ho azy
Rafitra fitaovana famahanana mandeha ho azy
Birao mandeha ho azy
Mandray fiara bobongolo amin'ny birao
Famafana mandeha ho azy sy ny môdely misaraka
Saw Edge Edge Ary Stacker Syste
Teo aloha: Hollow Core Wall Panels-pamokarana
Manaraka: Tsipika famokarana vovoka gypsum
Masinina famokarana birao Mgo-fanoherana afo
Masinina famokarana Mgo Board feno-mandeha ho azy
Masinina mpanamboatra birao Mgo
Mgo Machine Production Board